Mnangagwa – Tsvangirai GNU is modern day smith – muzorewa internal settlement! | ZimDaily
ZIMBABWE – The details of the secret talks between Zanu PF and MDC-T are coming. VP Mnangagwa will take from Mugabe in August 2016 and Tsvangirai will be enticed to join the new GNU mark 2 with an offer VP post plus a number of ministerial positions for his mates.
“The grand aim is to destroy Joice Mujuru’s threats of forming an alliance with Tsvangirai in 2018, while using the MDC-T to canvass for economic recovery and foreign investment from it’s Western allies,” reported The Telescope quoting a Zanu-PF legislator from Mashonaland West.
The economic hardships brought on Zimbabwe’s economic meltdown are real and getting worse all the time. The economic situation is socially and politically unsustainable and Zanu PF must accept the reforms now and not waste time in this modern day version of the Ian Smith – Abel Muzorewa internal settlement!